Filtrer les éléments par date : dimanche, 08 septembre 2019
dimanche, 08 septembre 2019 22:54
8 septambra 1929 - 8 septambra 2019 : 90 taona ny nandresena ny sampin-dRamiaramanana tao Andriambodilova - Ambohimanarina
Andro manan-tantara ho an’ny fiangonana FJKM ny 8 septambra. Feno 90 taona androany ny fahagagana lehibe samihafa, dia ny nandresena ny sampin-dRamiaramanana tao Andriambodilova - Ambohimanarina Antananarivo.
dimanche, 08 septembre 2019 22:52
dimanche, 08 septembre 2019 22:46
Mpandika teny: Nisaoran'i Papa manoka i mopera Marcel
Teo ampamaranana ny teniny, nandritra ny fihaonan'ny Papa Fransoa tamin'ireo Pretra sy Relijiozy tao Amparibe, dia nisaotra manokana an'i mopera Marcel, nanao ny fandikan-teny nanomboka teny Ivato, sy tamin'ny fihaonana rehetra nataon'i Papa teto Madagasikara.
Feno fanetre-tena i mopera Marcel, ka tsy nadikany ny tenin'i Papa nisaotra azy, fa ny Papa no niangavy azy handika ny fisaorana nataony azy.
Mompera Ranivomanalina Marcel, « curé » ao amin’ny EKAR Fiakarana Ambohitrimanjaka – Antananarivo no nanao ny fandikan-teny ho an'i Papa Fransoa nandritry ny fitsidihana Apostolika notanterahiny teto Madagasikara.
Nitsofiny rano manokana moa ity Pretra ity avy eo.
dimanche, 08 septembre 2019 22:38
St Michel Amparibe: Nihaona tamin'ny Pretra sy Relijiozy ary ireo olom-boatokana
Nanakatona ny fitsidihan'ny Papa Fransoa androany alahady 08 septambra ny fihaonany tamin'ireo Pretra, Diakra, seminarista, frère, katekista, masera sy Relijiozy lahy sy vavy, tao amin'ny kianjan'ny Masina Misely Amparibe.
Notsindriany tamin'izany ny toetra fanetren-tena tokony ananan'ireo mpitarika ny Fiangonana, ny fankaherezana azy ireo amin'ny asa mafy izay sahanina, indrindra ny fanantonana akaiky ny vahoaka taritina, ny fahaizana mihaino azy ireo, ny fitondran-tena mendrika.
Tsy adinony teo ampanombohana ny nahatsiaro ireo olom-boatokana tsy salama, na tsy afaka nanantona izao fihaonana Apostolika izao.
Nangataka tamin'ireto Pretra sy Relijiozy ireto izy hitondra ambavaka azy.
dimanche, 08 septembre 2019 22:14
Akamasoa: Fihaonana tamin'ireo Silamo
Nanamarika ny andro anio ny fifampiarabana nataon'ny solotenan'ny Silamo eto Madagasikara, notarihan'ny filohany, sy ny Papa Fransoa teny amin'ny toby Akamasoa.
dimanche, 08 septembre 2019 20:25